Global Voices teny Malagasy » Kenya: Bokin-tsarintany miteraka fanontaniana maro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Jolay 2018 15:21 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rotich Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, imanoela fifaliana
Sokajy: Kenyà, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Miady hevitra mikasika ny PNUE ( Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana ho an'ny Tontolo Iainana ) ireo blaogera keniàna. Voalohany, mikasika ny famoahana bokin-tsarintany mampiseho ireo fiovana ara-tontolo iainana ao Kenya, ary faharoa, momba ny fihatsarambelatsihy misy amin'ny famonjena ireo fivorian'ny PNUE anaty fiara mandany solika be. Efa namoaka fanehoankevitra blaogera manoloana ny fampiasan'ny Firenena Mikambana 4 x 4 ny Global Voices tao anatin'ny sokajy ”tontolo iainana” (jereo ny lahatsoratra Kenya : ny 4 x 4 an'ireo mpiasan'ny ONU  tamin'ny novambra 2008).
Tany am-piandohan'ity herinandro ity, namoaka bokin-tsarintany ny Fandaharanasan'ny Firenena Mikambana momba ny tontolo iainana, izay ny ivontoerany dia ao Nairobi, Kenya. Toy izao ny filaza ny famaritany ao amin'ny tranonkala PNUE [amin'ny teny anglisy avokoa ireo blaogy sy tranonkala voatanisa] :
Kenya: Manome porofo azo jerena sy tsy azo lavina momba ny fiovana haingana miseho amin'izao fotoana izao ao amin'ny rafitry ny tontolo iainana eto amin'ny firenena ilay bokin-tsarintanin'ny tontolo iainantsika andalam-piovana (Atlas of our Changing Environnement) navoaka noho ny fangatahan'ny fanjakana Kenyana, izay efa tratra tamin'ny fomba ratsy dia ratsy, noho ny tsindry sy ny asan'ny olombelona. Hazavain'ireo sary mampitaha ny ara-tantaran sy ny sary azo tamin'ny ‘télédétection’ ny fahasimban'ny ala, hamainan'ny faritra mando, fihenan'ny farihy, ny fiantraikan'ireo mpitsoa-ponenana amin'ny rafitry ny tontolo iainana marefo, ny marika fahasimban'ny morontsiraka.
Mitsonga ireo famintinana fototra tao amin'ilay bokin-tsarintany miisa pejy 168 i Phil avy ao amin'ny blaogy Kenya Environment news blog  ary mamintina ny zavatra hita. Mampifanandrina izany amin'ny Tanjona Fampandrosoan'ny Taonarivo ( UN's Millenium Development Goals ) sy ny Vision 2030 , fandaharanasan'ny governemantan'i Kenya izy. Manoratra izy:
Iray amin'ireo tsoankevitra fototra tamin'ilay bokin-tsary dia ny hoe ny fanajana ny tontolo iainana no fototra amin'ny fanatanterahana ny OMD (tanjona fampandrosoan'ny taonarivo). Misy fiantraikany lehibe amin'ny lafiny fahantrana sy fampandrosoana ireo loharanonkarena sy fepetra ara-tontolo iainana.
“‘Iray amin'ireo fomba mahomby indrindra mba hanampiana amin'ny fanenjehana ny OMD voalohany – manafoana ny fahantrana sy ny hanoanana tafahoatra – ny fanomezana antoka ny fitazonana kalitao sy habetsahana (fepetra sy loharanonkarena, ndt) ara-tontolo iainana mandritra ny fotoana maharitra”, hoy ny mpanoratra. Ohatra, iankinan'ny fahaveloman'ny olona mahantra ny loharanonkarena natioraly sy ny rafitra ara-tontolo iainana ; mety hampihena ny fotoana natokana ho an'ny fianarana ny fotoana lanin'ireo ankizy hantsakàna sy hitadiana hazo kitay ; sy ireo aretina mifandray amin'ny kalitaon'ny tontolo iainana, toy ny fivalanana, ny fifindràna otrikaretina mahery vaika any amin'ny taovam-pisefoana, ny homamiadan'ny rà ary ny homamiadana mpanjo ny ankizy, izay anton'ny fahafatesan'ny zaza.
Manome fahafahana lehibe ho an'ny fanjakan'i Kenya mba hiatrehana ireo fanamby ara-tontolo iainana toy ny singa lehibe ilaina amina fampandrosoana maharitra ho an'ny firenena ny Vina 2030, hoy ilay bokin-tsary, eo am-pamaranana”.
Mijery akaiky ilay famoahana ny blaogy Rafiki Kenya  ary manontany tena : ”Ny bokin-tsary vaovaon'i Kenya, fandaniana loharanon-karena?”. Ao anatin'ireo fanontaniana hafa momba ilay tatitra, mametraka ny fahazoan'ireo Keniàna salantsalany azy io izy. Eken'ilay blaogera fa manana endrika mahafinaritra ary tena vita tsara ilay tatitra, miaraka amin'ny vaovao sasany mahaliana, saingy…
… raha miditra lalindalina kokoa ianareo, tsy misy zava-baovao ilay bokin-tsarintany raha ny tena marina. Tsy misy zavatra tsy efa fantatsika no tiako tenenina. Na ilay lahatsary miaraka aminy aza toa somary mandiso fanantenana kely : indrindra ireo zavatra azonao jerena ihany koa ao amin'ny Google Earth, miaraka amin'ny feo tsy keniàna ao amin'ny fanehoankevitra.
Tena laharampahamehana be tamin'ny PNUE ve ny famokarana bokin-tsarintany toa izao? Misy dikany ve ny fanaovana fanadihadiana amin'ny marary iray raha toa ka efa fantatrao ny aretina mahazo azy? Raha tokony handany vola amin'ny fanaovana fitiliana sy famokarana tatitra ara-pahasalamana fanampiny, tsy tokony hanomboka ny hitsabo ilay marary ve ianao? Noho izany, mihevitra aho fa izany no tokony efa nataon'ny PNUE : manomboka mitsabo ilay marary. Manomboka mitsabo ny tontolo iainantsika izay tandindonin-doza amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana sy fanamoràna ny firotsahana an-tsehatra amin'ny fanatontosana, ohatra. Tena tsy niandry tatitra tsara be hafa natao hampitombo vovoka eo amin'ny talantalany ireo Keniàna.
Tsy takatr'ireo Keniàna salantsalany ihany koa ilay tatitra. Marina fa azonao alaina na/sy vidiana eto  ilay tahirin-draikitra. Fa keniàna iza no tena afaka ny haka tahirin-drakitrana 63 MB? Keniàna iza no afaka handoa 80 dolara Amerikana ho an'ny dika an-taratasy? Ary ampahatsiahivana fa sady tsy mbola tafiditra ao anatin'izany ny vidin'ny fandefasana azy avy any Angeletera. Mbola misitery amiko ny hoe fa maninona ny tatitra mikasika an'i Kenya, novokarin'ny fikambanana miorina ao Kenya (PNUE) no mbola tsy maintsy taterina avy any Angletera. Porofona fihatsarambelatsihy  hafa avy amin'ny PNUE ve izany? Efa manorisory ny blaogera sasany  volana vitsy izay ny fampiasan'ireo mpiasan'ny ONU 4 x 4 ao Nairobi.
Izay mitondra antsika mankany amin'ny lohahevitra iray hafa miteraka hatezerana. Ireo 4 x 4 entin'ny Filoha sy ireo olona ambony hafa mba handraisana anjara amin'ny fivoriana avo lenta ao amin'ny foiben'ny PNUE ao Gigiri, izay nanolorana ilay bokin-tsarintany nandritra ny adihevitra momba ny ”toekarena vaovao maitso”.
Manoratra i Dipesh avy ao amin'ny Sukuma Kenya …
”Ny toekarena tsy dia misy entona manafana ny tany”
Fiara toy ny inona hoy ianareo no entin'ireo olona ambony 140 ireo mba hanatrehana ity fivoriana ity? Iray amin'ireto angamba ?
Tsy misy isalasalana, te-hahazo antoka ireo manampahefana Ambony Be antsika ao amin'ny fanjakan'i Kenya fa afaka niaina nifanaraka tamin'ny fenitra napetraky ny Firenena Mikambana. Ary fantatsika fa tsy vitsy ireo fiara tsara be nomen'ny olon-tsotra Keniàna ho an'ny gvernemantany. Teo anelanelan'ny Janoary 2003 sy Septambra 2004, nandany, farafahakeliny 878 tapitrisana Shillings kenyana tamin'ny fividianana fiara mirenty ny fitondran'ny filoha Mwai Kibaki izay natokana ho ampiasan'ireo mpiasam-panjakanany ambony indrindra, toy ny minisitra, ny mpanampy azy ary ny sekreterany maharitra.
Tantarain'i Dipesh ny zavatra niainany manoloana ireo mpiasan'ny PNUE, raha toa ka niezaka ny hanazava tamin'ireto farany ny mahasarotra takarina ny hafatr'izy ireo izay natokana hankaherezana ny fampihenana ny marika karbônany raha toa ka 4 x 4 avokoa ireo fiaran'ny PNUE, izay mamoaka CO2 be dia be. Nametraka fifandraisana eo amin'ny fanolorana tsy mety ny loharanonkarena sy ny kolikoly ary ny kizy ara-tsakafo amin'izao fotoana izao ao Kenya ihany koa izy.
Manome tolokevitra ny fanehoankevitra  iray navoaka tao amin'ilay tranonkala, izay hamaranantsika ity lahatsoratra ity :
Tokony hanolotra fiarebe iombonana ho an'ireo rehetra mandray anjara amin'izany angamba itony karazana fivoriana itony, amin'izay hampihena ny isan'ny fiara manokana ampiasaina amin'ny fifamoivoizana isika. Mba manontany tena aho hoe ahoana no hampety an'izany. Raha toa ka mitatatata mitory ny mba haha-”maitso” kokoa an'i Kenya ny governemanta keniàna, raha ny tokony ho izy, tokony dingana nataony voalohany ny fanaovana hetsika fisantarana ka hanome ohatra. Fa mihevitra aho fa tsy mandeha araka ny lojika ny zavatra ao Kenya. Mbola tsy azoko foana hoe fa maninona ny fanjakana no mihevitra ny tenany ho ambonin'ny fiarahamonin'olontsotra, ny fahazoako ity fanjakana ity dia ny hoe napetraka mba hanompo ny olontsotra izy, fa tsy ny mifanohitra amin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/24/123128/
 Kenya : ny 4 x 4 an'ireo mpiasan'ny ONU: https://fr.globalvoicesonline.org/2008/11/18/1091/
 Kenya Environment news blog: http://kenvironews.wordpress.com/2009/02/17/new-atlas-maps-a-blueprint-for-kenyas-green-development/
 Millenium Development Goals: http://en.wikipedia.org/wiki/MDG
 Vision 2030: http://en.wikipedia.org/wiki/Kenya_Vision_2030
 manorisory ny blaogera sasany: https://globalvoicesonline.org/2008/11/18/yellow-humvees-and-the-un-procurement-scandal/
 Teo anelanelan'ny Janoary 2003 sy Septambra 2004, nandany, farafahakeliny 878 tapitrisana Shillings kenyana tamin'ny fividianana fiara mirenty ny fitondran'ny filoha Mwai Kibaki : http://http://www.marsgroupkenya.org/pages/stories/living_large/index.php